Maalinta Rosé Qaranka: Ku dabbaaldega Chicago Rosé
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Maalinta Rosé Qaranka: Ku dabbaaldega Chicago Rosé
Andorra Breaking News • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Khamriga & Ruuxa
Latitude Beverage, oo ah shirkad casri ah oo ka dambeysa noocyada khamriga ee qaranka sida 90 + Cellars iyo Lila Wines, ayaa xafladda u keeneysa Chicago xagaagan iyadoo la socota Celebrate Chicago Rosé, oo ah khamri xaddidan oo la cabbo xilli kasta.
U dabaaldega Chicago Rosé waxaa la abuuray iyadoo xagaaga la jecel yahay Chicago maskaxda lagu hayo, laga bilaabo calaamadda cajiibka ah ee lagu faani karo ee lagu muujinayo midabada magaalada iyo muuqaalka muuqaalka leh. Khamrigan waa mid dhaqameed dhaqameed koonfurta faransiiska ah ee Grenache, Syrah, Cinsault iyo Mourvedre oo ka yimid Languedoc, France. Waa cufan, cusbooneysiin, qalalan iyo midho leh udgoon khudradeed cusub iyo jeeriga cas. Ku laabo pizza saxan qoto dheer leh, hotdogs u eg Chicago iyo maalmo caajis ah oo ku harsan harada.
"Chicago waxay ku leedahay boos qaas ah qalbiyadeenna," ayuu yiri Kevin Mehra, oo ah madaxa shirkadda, Latitude Beverage. “Waxaan helnay soo dhaweyn diiran oo galbeedka-galbeed ah markii aan balaarinay ganacsigeena New England ku dhowaad toban sano ka hor, taasoo kadhigaysa Chicago mid kamid ah suuqyadeena ugu horeeya Sida sanadkeenna Rosé ee loo dalxiis tago biyaha hareeraha harada Michigan, khamrigan waxaa looga dabaaldegaa xagaaga Chicago marka ay magaaladu runti ubax tahay. ”
Kaliya u dabaaldegi maayo Chicago Rosé waxaa ku raaxeysan doona reer Chicagoans, waxay u fiicnaan doontaa bulshada maxalliga ah, sidoo kale. Hal doolar dhalo kasta oo la iibiyo waxay aadi doontaa Bakhaarka Weyn ee Chicago, xubin ka mid ah Quudinta Ameerika oo u qaybisa u dhiganta 159,000 oo cunto guud ahaan Degmada Cook maalin kasta. Iibsashada xilligan ee rosé ayaa la saadaalinayaa in ay u soo saaraan ku dhowaad $ 10,000 Bakhaarka Cuntada.
"Aad ayaan ugu mahadnaqeynaa wada-hawlgalayaasha sida 90 + Cellars oo naga caawiya inaan Chicago ka dhigno mid ka sii wanaagsan," ayay tiri Kate Maehr, oo ah agaasimaha guud ee Maamulka Cuntada ee Chicago iyo Agaasimaha Guud. Taageeradan ayaa loo tarjumay cunno caafimaad qabta iyo bulshooyin farxad ku wada nool. ”
Raadi Ku Dabaaldega Chicago Rosé dukaamada Mariano, iyo sidoo kale dukaamo badan oo khamri ah oo ku yaal aagga Chicago. Khamrigu wuxuu leeyahay SRP ah $ 14.99 waxaana la joogaa waqtigii loogu talagalay Maalinta Qaranka ee Sabtida, Juun 8.